ရိုး ရိုး ဘ လော့ဂ် : Honey can cure hangover အရက်နာ ကျလျှင် ပေါင်မုန့် ပျားရည်သုတ်စားပါ။
Honey can cure hangover အရက်နာ ကျလျှင် ပေါင်မုန့် ပျားရည်သုတ်စားပါ။
Gotabad hangover? Try honey on toast, saysanew study. Researchers from the Royal Society of Chemistry claim to have found that taking honey, the natural sweetner, isagreat way to help the human body deal with the toxic effects ofahangover.
ခရစ်စမတ် နဲ့ နှစ်သစ်ကူးမှာ အသောက်များလို့ခေါင်းထဲမကြည်မလင် ( အရက်နာ )ကျနေရင် ပျားရည်ကို ပေါင်မုန့် ကင်ပေါ်မှာ သုတ်ပြီး စားပေးပါတဲ့။ The Royal Society of Chemistery က Research အရ ပျားရည် ဟာ သဘာဝ အချိုဖြစ်ပြီး လူ့ ခန္ဒာကိုယ်ထဲက အရက် ကနေ ဖြစ်တဲ့အဆိပ်အတောက်တွေ မှ တဆင့် အရက်နာ ကျတာကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ်တဲ့ ။
အရက်နာကျတာဟာ အရက်မှာပါတဲ့acetadehyde ကြောင့်ပါ။ အရက်နာကျရင် ခေါင်းကိုက်ပါတယ်။ မူးဝေပါတယ်။ တခါတစ်လေ မှာ အန်တတ်ပါတယ်။ ကိုယ်လက်ညောင်းညာတတ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် Research အဖွဲ့ ကခေါင်းဆောင် Dr John emsley က " နွားနို့ တစ်ခွက်ကို အရင်ဆုံး သောက်ပေးပါ။ ပျားရည်ကို ပေါင်မုန့် မှာ ထောပတ် သုတ်သလို သုတ်စားပေးပါ။
Potassium နှင့် Sodium တွေဟာ ဒီအရက်နာကျချင်းကို တရစ်ရစ် ပြေပျောက်စေမှာပါတဲ့ ။ သောက်လိုက်တဲ့ နွားနို့ ဟာ အရက်ရဲ့ပြင်းအားကို dilute ဖြစ်စေပါတယ်။ အရက်ဟာ ရေဓါတ် ကို ဆုံးရှုံးစေပြီး မကြာခန ဆီး သွားစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် dehydration ဖြစ်တာ ဟာ အရက်နာ ကျတာကို ပိုပြီး ဆိုးဝါးစေပါတယ်။ မအိပ်ခင်မှာလဲ ရေတစ်ခွက် ဖြစ်အောင် သောက်ပေးဖို့အကြံပေးပါတယ်။ "
Ref: လန်ဒန်ထုတ် Maya သတင်းစားမှ ကိုးကားသည်။
JUSTICE999BURMA 8 January 2011 at 05:45
ရိုးရိုး 8 January 2011 at 11:11
အေး တကယ်သွားမတိုက်နဲ့ ဦး။
ဒီက ငါ့သူငယ်ချင်း ကတော့ မီးပန်းတွေဖေါက်ရင် သူ့အိမ်မွေးခွေးတွေ
လန့် လို့ ။ နည်းနည်းတိုက်တယ်တဲ့ တခြားဟာနဲ့ ရောပြီးတော့။ ပြီးရင် ခွေးက ယိုးဒယား ကသလို ဒယိုင်ဒယိုင်နဲ့ လျှောက်နေရော။